Amagama aBantu abafana 2016: namhlanje, amahle, anqabile
Xa umntwana osinda ixesha elide ebonakalayo kwintsapho, kubini uvuyo olukhulu kunye neengxaki ezibonakalayo. Abazali abakhathalelayo baqokelela iiphakheji kwikhaya lokubeleka, bathenge i-diapers, ryashonki, abahambahambayo, ii-encyclopaedias zokunyamekela ... Kwale nto, kodwa, ngokwenene, iqabane elithandekayo ngokukhawuleza umbuzo uvela malunga nendlela yokubiza umntwana. Namhlanje siza kukuxelela ngamagama amakhwenkwe azalwa ngo-2016 athandwa kakhulu!
Amagama ase-Orthodox ngamakhwenkwe-2016: ukuba okanye angabi?
Abazali banamhlanje banqwenela ukhetho olungaphethekiyo kwaye baninzi ngokuphindaphindiweyo ngaphambili, bafumana ilifa leNtshona. Nangona kunjalo, unyaka we-2016 usinikela umgaqo omtsha: ukubeka ingqwalasela ngokukhawuleza, impawu yamagama esikulo. Ziyakwazi ukuhluke ngokupheleleyo: isiGrike, isiRoman okanye iSlavic inqobo, kodwa phantse zonke zibhalwa kwizinto ezibizwa ngokuba zingcwele. Isiko lokukhetha amagama ngokubhekiselele kubangcwele lisuka kwixesha elidlulileyo, kwaye luphawu lwezizwe ezininzi ezidibeneyo nemibono yenkolo eqhelekileyo. Kukholelwa ukuba umntwana ogama lakhe libizwa ngegama lengelosi, umpostile, ongcwele, umfel 'ukholo okanye umfundisi obalaseleyo, kunye negama aliyi kufumana kuphela ingxenyenzana yobubele obuyimfuneko, kodwa ngokuzenzekelayo, njengokuba kunjalo, ukufumana okungabonakaliyo kwaye, ngokuqinisekileyo, ukukhuseleka okunzulu kwi-patron. Nangona abazali bagqiba ukubiza umntwana wabo ngegama elingavamile, kwiimeko ezininzi basenokukhuthaza ukuba banike omnye umntwana, elinye ibandla. Oku kuyinyani ngakumbi xa isigqibo senziwa ukwenza umbhaptizo. Ukuze uqonde kakuhle le ngxaki, sincome ukuba ukhangele ikhalenda yamagama ngokukodwa. Kubonakala ukuba amagama amakhwenkwe azalwe ngo-2016 awaphelelanga kwizinto ezimbalwa ezikhethiweyo nezamkelekileyo. Khetha izinto ezintle eziqhelekileyo okanye ezinqabileyo zilula!
Amagama amaSilamsi kubafana abazalwa ngo-2016: ubunzulu bezithethe zempuma
Ubunzulu bezithethe zempuma ngokwenene alupheli. Iingqondi zezo zonke iintlobo zezizukulwana zihlala zithuthuzela kunye nesigramente yokwabiwa kwegama, ingakumbi xa ixhathisa inkwenkwe - umlwi-mkhosi, umkhuseli, ummangaleli wemfundiso yenkolo, indoda, umzalwana, uyise, ummi. Ngoko ke, zonke iintlobo zeenguqu zakhethwa yinto eninzi yokuba ayikho indlela ekhethekileyo. Khangela, umzekelo, egameni likaMuhammad (oko kuthetha ukuba "udunyiswe") - ngaba lo mntu akafanelekile ukuba afanele ilizwe lakhe?
Enye into ebangel 'umdla: ukususela kwi-Middle Ages, kungekhona nje abafundisi abaqeqeshiweyo, kodwa nabavumisi beenkwenkwezi, abanezenzululwazi zabo babecingwa njengezakhono zefilosofi kunye nabasilumko, bebonke abachaphazelekayo kwimeko. Baqulunqa iiplani ezipheleleyo kunye neengcamango, ezimbalwa zazo, ngelishwa, zasinda. Nangona kunjalo, kuthi, kubaluleka kwesiqhelo esibalulekileyo, kuba thina ngokwethu siba negalelo kwinkcubeko yama-Islam ngokufaka izinto ezithile. Amagama amaSilamsi, okuya kuthi, ngokweengcali, kuya kuba yinto ethandwa kakhulu ngo-2016, unokubona kule zithombe.
Amagama aseTatar abafana abazalwa ngo-2016
Ekubeni siye saqalisa ukuthetha ngokulunga kwamasiko athile, kuya kuba yinto engalunganga ukuba ungabonakali amagama abo aseTatar abafumana ingqalelo. Ngaphandle kwenye i-ado, khetha nje uluhlu: Ababil, Abel, Abelzam, Abunasir, Abyzbay, Agzamkhan, Adzhebay, Adrar, Azamatullah, Aktai, Allahiyyar, Almatai, Artslan, Ahmetbary, Badghi, Badrullah, Baek, Bayramhan, Bayram, Bahram, Bashar , Valiakhmet, Valim, Valishah, Gabdelgaffar, Gabeljalil, Gabdessattar, Gaisa, Janahmet, uJanbak. Jani, Zabib, Zagidar, Zunnun, Kabanbai, Kazanbay. Kail, Kaim, Mugallim, Miyan, Mihri, Niyyaggul, Nugaybek, Nukrat, Nuraglyam, Rashat, Rizvan, Rijal, Saitmullah, Saitmuhammet, Saligaskar, Tashkay, Takhautdin, Halifaizh, Hamatgali, Khalfetdin, Hamazan, Shahbulat, Shafqatullah, Jawaray, Yazil. Siyathemba ukuba ulwazi lwethu olutshanje kunye neetafile ezinikezelweyo zikhanyise imeko yangoku yezinto kwaye zanceda ukufumana amagama asemakhwenkwe angama-2016 owucinga ukuba ngowona mntwana ofanelekileyo. Ungalibali ukubonana nezihlobo kunye nabo oba thembileyo - ukhetho luya kuba lula nakakhulu!
Yintoni ebangela ukunganeliseki phakathi kwezingane zethu?
Abazali "cha": indlela yokuphika umntwana, ukuqinisa igunya lawo
Umntwana kunye nemidlalo: emithathu imithetho ebalulekileyo
Ukugcinwa kokutya kwexesha elide
Ikhefu le-gingerbread kunye neebhanana
Yintoni eluncedo ukwazi xa uya eholide
Iipayi ezibhaka kunye nama-mushroom nenkukhu
I-Adygei ityuwa yinto eyintandokazi yeCaucasian centenarians
Ribeye steak nge rosemary, thyme kunye negalikhi
Ukusela okanye ukungasiphuzi: debunk iindloso malunga nekhofi esheshayo
Ukuphulukisa iipropati zentaba
Ukucocwa, ukunyusa nokukhusela isikhumba esibucayi
Izilwanyana zamanqanaba zokulahleka kwesisindo: iifom zokulahleka kwesisindo